DLZ-420/520 Kumbuyuutar otomaatig ah oo joogto ah oo iskala bixin ah mashiinka baakadaha faakuumka
Kani waa qalab baakad oo otomaatig ah oo ay ku jiraan kulayl-ku-samaynta fidsan, faakuum (sicir-bararka hawada), xidhida kulaylka, codaynta, goynta, ururinta iyo gudbinta.
Qaabka Ballaca filimka sare Hoostaballaca filimka shahaado vacuum Hawo cufan korontada awood Wadarta Miisaanka Cabirka
2. Under film pre-tensioning qalab meelaynta
3.Nidaamka kor u qaadida
4.Cross cutter qalab
5.Servo codeing system
6.Upper Film sameynta qalabka
7.Dib u warshadaynta qashinka
8. Sawirka golaha wasiirada korontada
Qalabku wuxuu inta badan ku habboon yahay: hilibka doofaarka, sausajka la dubay, bolse ham, sausage qallafsan, cagaha digaagga la soo qaaday, ukunta digaagduur, tofu la qalajiyey, alaabta kalluunka, hilibka lo'da, alaabta idaha, maraqa ciidda, khudradda la qalajiyey, jiiska, qaybaha elektaroonigga ah, alaabta birta ah iyo alaabooyinka kale ee u baahan baakad vacuum ah.
304 Qaab dhismeedka birta ah ee aan fiicnayn
1. Qaabdhismeedku wuxuu leeyahay awood sare iyo iska caabin daxalka.Godadka furka ee meel kasta oo go'an waxaa lagu farsameeyaa laser sax ah oo sarreeya hal mar si loo hubiyo saxnaanta isu-ururinta iyo in mashiinka oo dhan uu si habsami leh u socdo.
2. Ballaadhin dheeraad ah, marka foomka baakadaha loo baahan yahay in la cusboonaysiiyo, qaybaha khuseeya ayaa lagu dari karaa wakhti kasta iyadoo loo eegayo shuruudaha baakadaha.
Qalabka kor u qaadida isku xirka afar dhidibka
1. Qalabka kor u qaadista wuxuu ka samaysan yahay 6061 aluminium aluminium aluminium ah, taas oo kordhisa xasilloonida iyo xoogga qaybaha.Qaybaha simbiriirixa ahi waxa ay qaataan xadhkaha toosan ee xidhashada u adkaysta ee dibadda laga keeno, kuwaas oo sax ah meelaynta iyo deganaanshaha shaqada.Dhererka kor u qaadista waxaa loo hagaajin karaa si sabab la'aan ah iyadoo loo eegayo dhumucda baakadaha alaabta.Iyadoo aan la bedelin xawaaraha socodka, masaafada qaadista waa la soo gaabiyey si loo hagaajiyo xawaaraha baakadaha ee mashiinka oo dhan.
2. Qaybaha waxaa lagu dhejiyay gacmo garaafyo naxaas ah si ay u kordhiyaan sifeynta, yareeyaan nabarrada oo ay u dheereeyaan nolosha adeegga.Intaa waxaa dheer, gacan-gacmeedka naxaasta graphite waa mid aad u adag oo u adkaysta, kaas oo hubinaya xidhitaanka qolka wax-soo-saarka iyo qolka faakuumka.
Qalabka elektarooniga ah ee horay u adkeynaya
1. Isticmaalka biriiga korantada, bareegu waa xasiloon yahay xoogguna waa siman yahay, isaga oo ka fogaanaya ifafaale laalaab iyo laablaabashada alaabta la baakadeeyay.
2. Bandhigga dhijitaalka ah wuxuu muujinayaa in xoogga adkeynta la hagaajin karo.Furaha waxaa loo hagaajin karaa si habboon oo dareen leh iyadoo loo eegayo dhumucda, dabacsanaanta iyo jilicsanaanta filimka baakadaha si loo gaaro saameynta ugu fiican ee baakadaha.
1. Nidaamka xakamaynta caqli-galku wuxuu qaataa astaanta Jarmalka Siemens si isku mid ah, iyo dhibcaha xakamaynta waa mid jawaab celin ah oo iskaashi ah.Heerkulka, wakhtiga iyo cadaadiska faakuumka ee qayb kasta ayaa lagu soo bandhigayaa shaashadda kombiyuutarka, waxayna leedahay hawl u gaar ah oo lagu ogaanayo cilladaha.
2. Qaadashada German Siemens sare ee inertia servo motor iyo darawal, meelaynta silsiladu waa sax oo si degdeg ah u socota.
nidaamka qalliinka sirdoonka
1. Hawlgalka shaashadda taabashada, kontoroolka barnaamijka tooska ah, bandhig muuqaal ah oo ku saabsan dhammaan xaaladda socodka, ogaanshaha tooska ah ee sababta fashilka, fududahay in la shaqeeyo oo la ilaaliyo qalabka.
2. Shaashadda hawl-gelinta caqliga iyo bani-aadmiga ayaa ka fudud oo ka sii cad.Halbeeg kasta waxaa loo hagaajin karaa si ku habboon iyadoo loo eegayo alaabooyin kala duwan, iyo cabbirrada habraaca badeecada kala duwan ayaa la kaydin karaa.Hal-guji wicitaanku wuxuu badbaadiyaa waqti iyo dadaal.
Nidaamka ilaalinta badbaadada
1. Dhammaan qaybaha gudbinta;qaybo leh heerkul;qaybaha goynta iyo dhaqaaqa waxay ku qalabaysan yihiin qalabka ilaalinta, iyo furayaasha xidhiidhka birlabeedka ayaa lagu rakibay.Marka aaladaha ilaalinta aysan meesha ku jirin ama aaladaha ilaalinta mashiinka asalka ah aysan meesha ku jirin, mashiinku isla markiiba wuu istaagayaa.
2. Qalabka laftiisa waxaa lagu rakibay furayaasha joogsiga degdega ah ee meelo kala duwan, si ay u joojiyaan mishiinka wakhtiga shilku dhaco.
3. Waxaa mamnuuc ah in gacmaha, cagaha, gacmaha iyo qaybaha kale lagu gaarsiiyo biam beddelka, marka la dareemo markiiba wuu istaagayaa.
Nidaamka dib u warshadaynta filimka qashinka
1. Dib-u-warshadaynta qashinka waxay leedahay qalab lagu ogaanayo caqli-gal, kaas oo si toos ah u hagaajin kara xawaaraha hawlgalka iyadoo loo eegayo dhererka filimka qashinka.
2. Qalabku waa mid aan buuq lahayn, fududahay in la ururiyo filimka, oo ku qalabaysan awoodda 150W, hawlgal aan toos ahayn, badbaadinta isticmaalka tamarta.
Samaynta iyo kulaylka xirida caaryada
Dhammaan caaryada si degdeg ah ayaa loo beddeli karaa, noocyo badan oo caaryaal ah ayaa lagu beddeli karaa qalabyo si ay u fududeeyaan baakadaha alaabooyin badan.
Nidaamka jeexjeexyada kala duwan
Sida laga soo xigtay alaabooyin kala duwan, waxay ogaan kartaa jeexjeexa geesaha wareega, jeexjeexa fudud, godadka laalaada, jeexjeexyada sliting, feerka guud iyo codsiyada kale, iyo xawaaraha beddelka gooyuhu waa mid degdeg ah oo sahlan.
1.German Siemens Computer Programmable Logic Controller (PLC) kantaroolka, wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka baaxadda leh.
2. German Siemens 10-inch midabka aadanaha-mashiin interface taabashada taabashada.
3. 1.5KW German Siemens servo nidaamka xakamaynta, xawaaraha sare iyo heerka saxda ah ee tallaabo-tallaabo ah.
4. TYC silsilad isku dhejinta
5. Qalabka korantada ee dibadda laga keeno (Dareemka midabka American Bonner, Schneider contactor & relay, button button, ilaaliyaha awoodda, Yangming adag soo gudbinta gobolka, Japanese Omron u dhawaansho, iwm).
6. Qaybta pneumatic waxay qabataa nidaamka sambabada Yadeke Valve Terminal.
7. Bamamka faakuumka wayn ee wasakhaysan ee deegaanka-saaxiibtinimo ee mashiinka baakadaha heerkulbeegga sare ee vacuum (Rietschle/Busch, ikhtiyaariga ah shuruudaha macmiilka) laga keeno Jarmalka oo leh xirmo asal ah, oo leh heerka ugu sarreeya ee faakuumka 0.1 millibar.
8. Nidaamka raadinta korantada ee dibedda laga keeno iyo filimka midabka ayaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in booska qaabku uu sax yahay.
9. Mashiinka oo dhan wuxuu qaataa 304 jir bir ah oo bir ah, kaas oo leh awood sare, iska caabin xoog leh oo aan sahlanayn in la beddelo.
10. Xuubabka sare iyo kuwa hoose waxay qaataan nooc cusub oo ah habka xuubka soo jiidashada.
11. Qaabaynta, xidhidhiyaha iyo kor u qaadida waxay qaataan kabaal sambabada sambabada ah kor u qaadida madax banaanida iyo habka is-qufulka.
12. Meelaynta saxda ah ee hore, danbe, bidix iyo jihooyinka midig.
13. Gooyaha transverse wuxuu u shaqeeyaa si madaxbanaan isagoo leh hal gooye iyo kontoroolka kombuyuutarka dhexe.
14. Lagu qalabeeyay habka dib u warshadaynta qashinka geesaha.
16. Dhammaan qaybaha samaynta, shaabadeynta, mindida jiifta iyo mindida dheer waxay ku qalabaysan yihiin nidaamka ilaalinta badbaadada iyo daboolka ilaalinta.
17. Qalabku waxa uu ku qalabaysan yahay digniin ama nidaamyo ilaalin ah sida weji lumin ama rogaal celis, koronto xad-dhaaf ah ama hooseysa, saliid xilliyeed makaanik, iwm, kuwaas oo ku habboon hawl-wadeennada inay isticmaalaan oo ay hagaajiyaan.Ilaalinta joogsiga tooska ah marka uu jiro guuldarro oo muuji macluumaadka khaladka iyo daawaynta u dhiganta ee guuldarrada kumbiyuutarka.
Hore: Tamarta hawada khadka qalajinta caqliga
Xiga: Mashiinka dhaqida wareega wareega ee toosan
Mashiinka Baakaynta Faaruqa Ganacsiga
Mashiinka Baakaynta Fakimka Warshadaha
Mashiinka Baakadaha Hilibka
Mashiinka Baakaynta Hilibka
Mashiinka faaruqinta ee Baakadaha Cuntada
Qiimaha Makiinada Baakadaha Vacuum
Mashiinka Baakadaha Maqaarka
Mashiinka baakadaha cusub ee quful jawiga oo la beddelay
Mashiinka baakadaha vacuum maqaarka
DZ600/2S mashiinnada baakadaha Vacuum la hagaajin karo